खेलकुद - विश्वकप क्रिकेट : न्युजिल्याण्डले दियो पाकिस्तानलाई २३८ रनको चुनौति
विश्वकप क्रिकेट : न्युजिल्याण्डले दियो पाकिस्तानलाई २३८ रनको चुनौति | खेत रोप्न धानको ‘ब्याड’ तयार भयो, पानी आयो मल आएन ! | याे पटककाे धान दिवसको मूल कार्यक्रम बर्दियाको राजापुरमा | जागरण पछि आन्तरिक अन्तरक्रियामा कांग्रेस | लोकसेवाको विज्ञापनसम्बन्धी विवादमा आइतबार सुनुवाइ हुने
एजेन्सी । विश्वकप क्रिकेटमा जेम्स निसाम र कोलिन ग्रान्डहोमको प्रदर्शनको भरमा न्युजिल्याण्डले पाकिस्तानविरुद्ध सम्मानजनक रन बनाएको छ । ईंग्ल्याण्डको बर्मिङ्घममा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको न्युजिल्याण्डले २३८ रनको लक्ष्य दियो । खराब सुरुवात गरेको न्युजिल्याण्डका लागि नासिमले अविजित ९७ र ग्रान्डहोमले ६४ रन बनाएपछि निर्धारित ५० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर २३७ रन बनाएको हो । न्यजिल्याण्डका लागि केन विलियम्सनले पनि महत्वपूर्ण ४१ रनको योगदान गरे । मार्टिन गुप्तिल ५, रोस टेलर ३, कोलिन मुन्रो १२ र टम लाथम १ रनमा आउट भए । मिचेल स्यान्टनर ५ रनमा अविजित रहे ।	थप पढ्नुहोस्
प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको उपाधि एपिएफले चुम्यो
कञ्चनपुर । भीमदत्तनगरमा जारी प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेट राष्ट्रिय प्रतियोगिताको उपाधि सशस्त्र प्रहरी बलको एपिएफ क्लबले जितेको छ । घरेलु टोली सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई छ विकेटले पराजित गर्दै एपिएफले सो उपाधि जितेको हो । टस जितेर फिल्डिङ रोजेको एपिएफले निर्धारित २० ओभरको खेल ७१ रनमा समेटेको थियो । बहत्तर रनको विजय लक्ष्य पाएको एपिएफले १४ ओभरमा चार विकेटको क्षतिसहित ७४ रन बनाउन सफल भयो ।	थप पढ्नुहोस्
एजेन्सी । आईसीसी विश्वकप क्रिकेटमा आज 'बुधबार' न्युजिल्याण्ड र पाकिस्तानबीच प्रतिस्पर्धा हुदैछ । बिर्मिङ्घममा दुवै टोली मैदान उत्रदै गर्दा नजर सेमिफाईनलमा हुनेछ । पाकिस्तानविरुद्व जित निकाल्दै न्युजिल्याण्ड दुई खेल अगावै सेमिफाईनल यात्रा तय गर्न चाहन्छ । निकै फर्ममा देखिएको न्युजिल्याण्डले पाकिस्तानविरुद्व सहज जित निकाल्ने कप्तान केन विलियम्सले बताएका छन् । तर सेमिफाईनल पुग्ने सम्भावना बलियो बनाउन पाकिस्तानलाई अन्तिम मौका छ । उसलाई अन्तिम ४ को यात्रा तय गर्न बाँकी खेल जित्नैपर्ने दबाब छ ।	थप पढ्नुहोस्
अलराउण्डर आन्ड्रे रसेल विश्वकपबाट आउट
काठमाडौं । वेष्ट इन्डिजका अलराउण्डर आन्ड्रे रसेल विश्वकप क्रिकेटबाट आउट भएका छन् । इंग्ल्यान्ड र वेल्समा जारी विश्वकप क्रिकेटमा रसेलले चोटकै कारण राम्रो प्रदर्शन गर्न सकिरहेका थिएनन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी)ले जनाएअनुसार रसेलले घुँडाको चोटको कारण विश्वकपका बाँकी खेल गुमाएका हुन् । रसेलको स्थानमा २६ वर्षीय ब्याट्सम्यान सुनिल अम्बरिसलाई टिममा बोलाइएको छ । विश्वकपअघिका खेलहरुमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका रसेल जारी विश्वकपमा भने चल्न सकेनन् । उनी चोटग्रस्त भएपछि वेष्ट इन्डिज टिमबाट बाहिरिएका हुन् ।	थप पढ्नुहोस्
प्रधानमन्त्री कप महिला टी-ट्वान्टी क्रिकेट : पहिलो सेमिफाइनल खेल रद्द !
काठमाडौं । कञ्चनपुरमा जारी प्रधानमन्त्री कप महिला टी-ट्वान्टी क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत पहिलो सेमिफाइनल खेल रद्द भएको छ । कभर्डहल क्रिकेट मैदानमा मंगलबार वर्षाको कारण भिजेको मैदान नसुक्दा सुदुरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश २ बीचको पहिलो सेमिफाइनल खेल रद्द भएको हो । हिलाम्मे मैदानको कारण खेल रद्द भएसंगै सुदुरपश्चिम प्रदेश फाइनलमा पुगेको छ । प्रतियोगिताको नियम अनुसार सुदुरपश्चिम समूह विजेताको हैसियतमा फाइनल पुगेको हो । सुदुरपश्चिम समूह 'ए' को शीर्ष स्थानमा रहदै सेमिफाइनल पुगेको थियो ।	थप पढ्नुहोस्
आज विश्वकप क्रिकेटमा इंग्ल्याण्ड र अष्ट्रेलिया भिड्दै, कसले मार्ला बाजी ?
एजेन्सी । इंग्ल्याण्डमा जारी १२ औं संस्करणको आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा आज 'मंगलबार' एक खेल हुँदैछ । लर्ड्समा हुने खेलमा दुई उपाधि दाबेदार राष्ट्र इंग्ल्याण्ड र अष्ट्रेलियाबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दुई टोलीबीचको खेल नेपाली समय अनुसार दिउँसो ३:१५ मा सुरु हुनेछ । लर्ड्स क्रिकेट मैदानमा दुवै टिम जित निकाल्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रने छन् । दुवै टोली जित निकाल्दै सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावनालाई बलियो बनाउन चाहन्छ । त्यसैले दुई हेबिवेट राष्ट्रको भिडन्त रोमान्चक हुने अनुमान गरिएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
एजेन्सी । केही दिन अघि मात्र युवराज सिंहले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गरेपछि भारतीय क्रिकेटर मनप्रीत गोनीले पनि सन्यास लिएका छन् । उनी ग्लोबल टी–२० क्यानडामा आवद्ध भएका थिए । गोनीले भारतका लागि २ वटा एक दिवसीय क्रिकेटमा सहभागिता जनाएका थिए । तर उनको प्रदर्शनले भारतीय टिममा लामो समयसम्म स्थान बनाउन सकेनन् र उनी घरेलु लिगमा मात्रै देखिएका थिए । भारतीय खेलाडीहरुले घरेलु लिग लगाएतमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका बेला अन्य विदेशी लिग खेल्न नपाउने प्रावधान रहेकै कारण उनले भारतीय टिमका सबै फरम्याटबाट सन्यासको घोषणा गरेका हुन् ।	थप पढ्नुहोस्
कोपा अमेरिका क्वाटरफाइनल : कसले कोसँग र कहिले खेल्दैछ ? हेर्नुहोस् !
एजेन्सी । कोपा अमेरिका अन्तर्गत समुह चरणाका खेलहरू सकिएका छन् । अब क्वाटरफाइनलका लागि खेल तालिकातयार भएको छ । क्वाटरफाइनलका लागि समुह ‘ए’ बाट विजेता ब्राजिल, उपविजेता भेनेजुएला र तेस्रो स्थानको पेरू क्वाटरफाइनलमा खेल्नेछन् । त्यस्तै समुह ‘बी’ विजेता कोलोम्बिया, उप-विजेता अर्जेन्टिना र तेस्रोमा रहेको पाराग्वे क्वाटरफाइनलमा छन्। समूह ‘सी’ को विजेता उरुग्वे र उप-विजेता चीली अगाडी बढेका छन् । समूह ‘ए’ बाट ४ अंक जोडेको पेरु तेस्रो स्थानमा रहेको हो भने ‘बी’ बाट २ अंक जोडेको पाराग्वे तेस्रो स्थानमा रहन सफल बन्यो ।	थप पढ्नुहोस्
विश्वकप क्रिकेटमा अहिले बंगलादेशविरुद्ध बलिङ गर्दै अफगानिस्तान
एजेन्सी । इंग्ल्याण्डमा जारी १२ औं संस्करणको आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा अहिले बंगलादेश र अफगानिस्तानबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । साउथह्याम्पटनमा बंगलादेशविरुद्ध अफगानिस्तानले टस जितेको छ र पहिले फिल्डिङ रोजेको छ । अफगानिस्तानले बलिङ रोजेपछि बंगलादेशले सुरुवातमा ब्याटिङ गर्नेछ । द रोजबल क्रिकेट मैदानमा बंगलादेश जित निकाल्दै शीर्ष चारमा रहदै सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना जीवित राख्न चाहन्छ । बंगलादेशले ६ खेलबाट ५ अंक जोडेको छ । बंगलादेशलाई सेमिफाइनल सम्भावना कायम राख्न जित्नै पर्ने दबाब छ ।	थप पढ्नुहोस्
उपमेयर कप फुटबल सेमिफाइनलमा वालिङ र बाह्रबिसे नगरपालिका,विराटनगर र चौदण्डीगढी नगरपालिका भिड्ने
काठमाडौँ । राजधानीमा जारी अन्तर नगरपालिका उपमेयर कप महिला फुटबल प्रतियोगितामा विराटनगर महानगरपालिका, विदुर नगरपालिकालाई पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । हलचोकस्थित सशस्त्र प्रहरी बल (एपिएफ) को मैदानमा आज भएको समूह चरणको अन्तिम खेलमा विराटनगरले विदुर नगरपालिकालाई ३–२ गोल अन्तरले पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो । यो खेलसँगै उक्त प्रतियोगिताको सेमिफाइनल समीकरणसमेत पूरा भएको छ । विराटनगरसँगै चौदण्डीगढी, वालिङ र बाह्रबिसे नगरपालिका सेमिफाइनलमा पुगेका छन् ।	थप पढ्नुहोस्